Mikel Arteta oo ka hadlay qorshayaasha suuqa kala iibsiga ee Arsenal ee bisha Janaayo iyo mustaqbalka Balogun Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Mikel Arteta oo ka hadlay qorshayaasha suuqa kala iibsiga ee Arsenal ee...
In a shir jaraa’id oo uu qabtay , Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayuu kaga hadlay qorshaha suuqa kala iibsiga ee kooxda iyo sidoo kale mustaqbalka Balogun.
Gunners ayaa dhawaan soo nooleysay ololaheeda horyaalka afar guul iyo hal barbaro oo ay ka heshay shantii kulan ee la soo dhaafay taaso keentay inay ku jiraan kaalinta 10aad ee kala sareynta.
Waxay weli 7 dhibcood u jiraan booska loogu soo baxo Champions League waxayna rajeynayaan inay boosas ka sameystaan ​​inta lagu guda jiro ololaha.
Ilaa iyo haatan, kooxda ka dhisan waqooyiga London waxay diirada saaratay bixitaanka ciyaartoyda waxayna durbaba ogolaadeen heshiis amaah ah William Saliba iyo Sead Kolasinac halka Matt Macey iyo Sokratis ay si joogto ah uga dhaqaaqeen.
“Waxaan ku jirnaa howshaas haatan – waxaan sameynay qeybtii hore (yareynta kooxda) wax badan ama ha yaraatee hadana waxaan diirada saareynaa wajiga labaad (keenida ciyaartoy cusub),” ayuu u sheegay Arsenal.com
Hadalka Arteta ayaana keeni laga dheehan karaa in kooxda lasoo wareegeyso xidigo muhiim ah bisha January.
Previous articleMikel Arteta: ‘Frank Lampard wuxuu u qalmaa in waqti badan la siiyo Chelsea’
Next articleKevin De Bruyne ayaa laga yaabaa inuu seego kulanka Manchester City ay la ciyaareyso Liverpool